Beautyhealthcare – Page2– My Doctor
DrMay ThantSyn	2019-03-04T17:44:05+00:00
ညအိပ်ရေးပျက်ခြင်းနှင့် မျက်ကွင်းညိုတာဆက်စပ်နေပါသလား? ''အိပ်ရေးမပျက်စေနဲ့ မင်းရဲ့ မျက်ကွင်းလေးတွေ ညိုပြီးမဲမယ်'' FM ကပျံ့လွင့်လာတဲ့ Xboxရဲ့သီချင်း ဟုတ်ပြီ။ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ အိပ်ရေးပျက်တဲ့အခါ မျက်ကွင်းလေးတွေ တကယ်ကိုပဲညိုမဲတတ်ကြပါသလား? အဖြေကတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ညိုတတ်ပါတယ်။ မဲတတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဒီလို ဖြစ်ရသလဲ? မျက်ကွင်းညိုခြင်းကို လူတိုင်းတစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါ ကြုံဖူးကြမှာပါ။မိန်းကလေးတွေဆို
DrMay ThantSyn	2019-03-04T17:13:12+00:00
သားသားမီးမီးခြေထောက်ပေါ်က အနာလေးတွေ နုနယ်လှတဲ့ ကလေးလေးတွေရဲ့ ခြေထောက်လေးတွေပေါ်မှာ အနာလေးတွေ၊အဖုလေးတွေ၊ယားနာလေးတွေ ဖြစ်လေ့ရှိတာကို ဖေဖေမေမေတို့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ အချို့အနာလေးတွေက တစ်ရက်နှစ်ရက်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားကာ အချို့ကအတော်ကြာကြာကျန်နေတတ်တာကိုလဲ တွေ့ရမှာပါ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ ခြေထောက်တွေမှာအဖြစ်များတဲ့ အနာလေးတွေအကြောင်းထဲက နှင်းခူ(Eczema)အကြောင်းလေးကို ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှင်းခူ(Eczema)ဆိုတာ ဘာလဲ နှင်းခူဆိုတာ ကလေးတွေမှာ
DrMay ThantSyn	2019-03-04T17:07:03+00:00
အရေပြားကင်ဆာ ကာကွယ်ဖို့ရာ ကျန်းမာစိုပြေပြီး ရောဂါကင်းဝေးတဲ့ အသားအရည်လေးကို မိန်းကလေးတို့ပိုင်ဆိုင်လိုကြမှာပါ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ အသားအရေလေးတွေလှပပြီး အရေပြားကင်ဆာမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုတွေကာကွယ်ရမလဲဆိုတာလေးပြောပြချင်ပါတယ် အရင်ဦးဆုံးအရေပြားကင်ဆာဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာပြောပြပါမယ် အရေပြားကင်ဆာမှာ ဖြစ်တဲ့ဆဲလ်တွေအပေါ်မူတည်ပြီး အဓိက(၃)မျိုးရှိပါတယ် 1)Squamous cell carcinoma(SCC) 2)Basal cell carcinoma
DrMay ThantSyn	2019-03-04T16:53:21+00:00
ဆောင်းတွင်းနှင့်အသားခြောက်ခြင်း ဆောင်းတွင်းရောက်တဲ့အခါ လူတိုင်းအနည်းနဲ့အများတော့ အသားခြောက်ခြင်းကိုခံစားရမှာပါ။ အသားအရည်လေးတွေ ခြောက်လာပြီး အက်ကွဲကြောင်းလေးတွေပေါ်လာတတ်ရုံမက သ်ိပ်ဆိုးတဲ့အခါအသားတွေနာကျင်ကွဲအက်ပြီး အရေပြားတွေပါကွာလို့ စိတ်ရောလူရောအနှောက့်အယှက် ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းကျမှ ဘာကြောင့်အသားအရေပိုခြောက်ရသလဲ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆောင်းတွင်းသည် ရာသီဥတုသာအေးနေပြီး လေထုစိုထိုင်းဆ(Humidity level)မှာ လျော့ကျသောကြောင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားတွေပါ ခြောက်သွေ့လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားပေါ်တွင်သဘာအတိုင်းရှိနေသော
DrMay ThantSyn	2019-03-04T16:56:41+00:00
အသားအရည် ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းရာမှာ မသိမဖြစ်အချက်ကလေးတွေ မိန်းမကောင်းတို့ရဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ အသားအရေ၏ကောင်းခြင်းကို မတ်မတ်တို့လိုချင်ကြမှာမလွဲပါ၊၊ အသားအရည်ကာင်းခြင်းလို့ဆိုရာမှာ ဖြူနေမှ ဆွတ်နေမှ မဟုတ်ပါ။ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး စိုစိုပြေပြေ တင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့ ကြည့်ကောင်းသောအသားအရည်လေးသာဖြစ်ပါတယ်၊ဖြူခြင်းညိုခြင်းက အဓိကမကျပါ။ ဒီလိုကျန်းမာစိုပြေပြီး ရေဓါတ်ပြည့်ဝတဲ့ စွဲမက်ဖွယ်အရေပြားအလှလေးကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်းအားဖြင့် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ
DrMay ThantSyn	2019-03-04T17:00:55+00:00
အသားစိုပြေဖို့ နည်းလေး တွေ အကြောင်း သင်သိစေဖို့ အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် နုပျိုလှပနေသော အမျိုးသမီးများကိုတွေ့တိုင်း “ဝိုး သူတို့ဘာလို့ဒီလောက်အရွယ်တင်နေတာလဲ” ဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို သိလိုပါလိမ့်မယ်။တကယ်တမ်းတော့ ဒီလို နုပျိုရခြင်းဟာ ဆုတောင်းကောင်းခြင်းထက် အချိန်ပေး ပြုစုမှုဟုပြောလျှင် မအံ့ဩလိုက်ပါနဲ့။ ဒါဟာ အမှန်တရားပါပဲ။ အရေပြားဟာ ခန္တာကိုယ်ရဲ့
DrMay ThantSyn	2019-02-26T15:10:57+00:00
ခုနှစ်ဆောင်တိုက်ခန်းမှာ လင်းလက်နေသော အသားအရေများပိုင်ဆိုင်စေဖို့ အသားညိုသူတွေက ဖြူချင်ကြတယ်…..ဖြူသူတွေက ညိုချင်ကြတယ်….. အသားမညီသူတွေက အသားအရောင်လေးတပြေးတည်း ညီချင်ကြတယ်။ တကယ်တော့ အသားအရေ မညီညာခြင်းကလည်း ပြသနာတစ်ရပ်ပင်။ အသားဖြူဖြူ ညိုညို …..အနည်းဆုံးတော့ ခန္ဓာကိုယ်အသားအရောင်လေးညီနေရင် ဘာပြောပြောကြည့်လို့ အဆင်ပြေသည်။အသားမညီတဲ့အခါကျ မိတ်ကပ်လိမ်းရတာ …..ဝတ်ရစားရတာ သိပ်အဆင်မပြေလှ။ ဘယ်လိုအရာတွေကြောင့်
DrMay ThantSyn	2019-02-26T16:09:54+00:00
ဝက်ခြံ အများအပြားထွက်လာခြင်း ရုတ်တရက် မျက်နှာပေါ်မှာ ဝက်ခြံများတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးထွက်လာတတ်သည်ကို လူတိုင်း အနည်းနှင့်အများကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းများ ကိုမူ သတိမထားမိဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းရင်းများကို လေ့လာခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုလှပသော မျက်နှာလေးများးပိုင်ဆိုင်ကြစေရန် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ (၁)ဖုန်းမျက်နှာပြင် မသန့်ရှင်းခြင်း ဖုန်းမျက်နှာပြင်နှင့် မျက်နှာ ထိတွေ့ပြီး
DrMay ThantSyn	2019-02-14T10:44:51+00:00
နံနံပင်၏ အက်ျိုးကျေးဇူးများ နံနံပင်ကို မြန်မာဟင်းလျာတွေ မှာ သုံးကြပါတယ်။ ခေါက်ဆွဲ၊ မုန့် ဟင်းခါးမှာလည်း ထည့်စားကြသလို၊ အသုပ်တွေမှာလည်း ထည့်ပါတယ်။ ဒီတိုင်း ငါးပိရည်နဲ့ တို့ စရာ အဖြစ်လည်း စားတတ်ကြ ပါသေးတယ်။ ကြိုက်တဲ့ သူတွေက တော်တော် ကြိုက်ကြပေမယ့်
DrMay ThantSyn	2019-02-11T18:48:23+00:00
ရေနွေးကြမ်း၏ ကောင်းကျိုးများ ရေနွေးကြမ်းဆိုတာ မြန်မာတို့အနှစ်သက်ဆုံး ထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထမင်းပွဲတိုင်း၊ ဧည့်ခံပွဲတိုင်း၊ အချိ်ုပွဲတိုင်း မပါမဖြစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ရေနွေးကြမ်းနဲ့ မြန်မာ့ဓလေ့ ဟာ ခွဲမရခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းကပါပဲ။ မြန်မာရေနွေးကြမ်းဟာ ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။ ကောင်းကျိုးတွေလည်း